घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि काम गरिरहेका छौं « Online Sajha
भर्खरै सम्पन्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाको चौंथो जिल्ला सम्मेलनबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईहरुको संस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न ?
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ भनेको उद्योग र उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । यो संस्था नेपालमा २०४७ सालमा केन्द्रमा स्थापना भएको हो । रोल्पा जिल्लामा २०६८ सालमा स्थापना भइ व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । र घरेलु विकास समितिसँग सहकार्य गरेर हरेक व्यवसायीलाई प्रभावकारी र जीवनउपयोगी सीप, तालिमहरु गराइरहेका छौं । त्यसका साथै संस्थाले गर्नुपर्ने कामहरु अनेक छन् । उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि मात्र नभएर सीप विकास, उद्योगहरुको सुरक्षाका कुराहरुमा समन्वय, यसका अधिकारका कुरा लगायत यसले दिने सुलभ सेवाका विषय समेत यसमा जोडिएका हुन्छन् । र यससँग काष्ठ उद्योग, फर्निचर ग्रील उद्योग, स्टिल उद्योग, अल्लो उद्योग, धागो उद्योग, जुत्ता उद्योग, जुट उद्योग, सिलाई बुनाई उद्योग, कपास उद्योग, छाला उद्योग लगायत साना, घरेलुदेखि ठूला उद्योगहरु यस महासंघ अन्तर्गत पर्दछन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आवद्ध संस्थाहरु र महासंघले अहिलेसम्म गरेका काम के के हुन् ?
यससंस्थासँग विभिन्न संस्थाहरु जोडिएका हुन्छन्, जस्तोः घरेलु विकास समिति, दिमेघा, जिल्ला महिला उद्यमी र सिलाई बुनाई व्यसायीहरुको आफ्ना संस्थाहरु संलग्न छन् । र अहिलेसम्म महासंघले व्यवसायिक हकहितका कुरा, व्यवसाय नवीकरण र जिल्लामा हुने व्यवसायिक तालिमहरुको समन्वय, सहकार्य, आयोजना तथा प्रतिनिधित्व गरी व्यवसाय मार्फत् सबैलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छौं ।
घरेलु तथा साना उद्योगी, व्यवसायीहरु जिल्लाभर छरिएका छन्, सबैलाई महासंघमा समेट्न संस्थाले गरेका प्रयास र संलग्न हुन चाहने व्यवसायीका लागि प्रावधानहरु के के छन् ?
जिल्लाभर छरिएर रहेका व्यवसायीलाई महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थानीय तहहरुमा समेत समितिहरु चयन गरी सम्पूर्ण व्यसायीलाई दर्ता प्रक्रियामा लिएर महासंघको पनि सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौं । अन्य महासंघमा आवद्ध हुन चाहने व्यवसायीहरुले घरेलु विकास समितिमा दर्ता भइ आवश्यक प्रक्रियाका साथ आएमा महासंघले सदस्यता प्रमाणपत्र दिन्छ ।
एउटा स्वतन्त्र उद्योगी व्यवसायी तपाइँहरुको महासंघमै संलग्न हुनुपर्ने कारण के छ ?
मैले माथि पनि भनेँ । उद्योगी व्यवसायीको हकहितको कुरा हो । सबै व्यवसायी एक भएर जाँदा एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । कुनै कारणवस व्यवसाय धरापमा प¥यो भने क्षतिपूर्तीका लागि संस्थागत पहल हुन्छ । एक्लै गर्दा आउने सबै किसिमका जोखिमलाई एक्लैले उठाउनुपर्छ भने संस्थामा आवद्ध भएपछि हरेक कुरा संस्थागत अगाडि बढ्छ । यसमा उद्योगी व्यवसायीकै उपकार हुन्छ । जिल्लामा हुने हरेक अवसरहरुसँग व्यवसायीहरुलाई जोड्छौं यसले गर्दा महासंघमा जोडिनु एउटा व्यवसायीका लागि फाइदाकै कुरा छ । र अर्कोकुरा हामी विशुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्था भएकाले कुनै राजनीतिक दल वा विचारबाट टाढा छौं । व्यवसायीहरुकै संस्था व्यवसायीहरुले नै सञ्चालन गरेकाले हरेक व्यवसायी यसमा जोडिनु जरुरी छ ।
तपाई एउटा अब्बल व्यवसायीको रुपमा पनि परिचय बनाउनुभएको छ, यहाँको अनुभवमा रोल्पामा बसेर व्यवसाय गर्दा आउने खास चुनौतीहरु के के छन् ?
मेरो विचारमा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तीमा असहजता र बस्तुको बजारिकरणमा समस्या छ । पहाडी भूभागमा आयात निर्यातमा निश्चय नै समस्या हुन्छ । राज्यले व्यवसायीलाई विभिन्न दोहोरो कर लगाउँदा पनि समस्या भएको छ । व्यवसायीलाई फस्टाउने र यसको हरेक कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने हो । आफ्नै देशमा स्वरोजगार भएका हरेक व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । व्यवसाय धरापमा परेको खण्डमा पनि विमाको माध्यमबाट होस् या अन्य हिसाबले होस्, क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरियो भने लगानी बढ्छ र हरेक व्यक्ति सानै लगानीमा भए पनि स्वरोजगार बन्छ । यसतर्फ राज्य र अन्य सरोकारवाला पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।
कोरोनाका कारण घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई के कस्तो समस्या परेको छ ?
कोरोनाका कारण विश्व नै प्रभावित भएको अवस्थामा हाम्रा व्यवसाय प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । अझ लकडाउनका कारण कच्चा पदार्थ धुवानी पूर्णरुपमा रोकियो । उद्योग व्यवसायहरु पुरै बन्द भयो । मजदुरहरुको आयआर्जनमा अवरोध भयो । व्यवसाय पनि निकै घाटामा गएको कारण अहिले धेरै व्यवसायी निरास अवस्थामा छन् भने कतिको उठीबास पनि लाग्यो । कोरोना महामारी त हामी व्यवसायीका लागि ठूलो अभिसाप जस्तो भयो ।
घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि कसले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरोकारवाला सबै निकाय खासगरि स्थानीय सरकारले व्यवसायीको उत्थानका लागि विनाधितो ऋण उपलब्ध गराएको खण्डमा धेरै राहत पुग्थ्यो । व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले हरेक नीति कार्यक्रम ल्याउँदा हामीसँग पनि छलफल गर्न जरुरी छ । राज्यबाट गरिएका लगानी केही सीमित व्यक्तिले खाने गरेको गुनासो धेरै सुनिन्छन् । वास्तविक व्यवसायीलाई अझ प्रेरित गर्ने र अन्य वेरोजगार युवाहरुलाई पनि स्वरोजगार बन्ने गरी राज्यले सोच्न आवश्यक छ । व्यवसायीसँग सम्बन्धित बजेटबारे छलफल गर्दा वा अन्य क्रियाकलापमा महासंघलाई पनि स्थानीय सरकारले जोड्ने प्रयास गरोस् । हामी व्यवसायीलाई पनि हाम्रो पक्षमा सरकार छ भनेर निर्धक्क काम गर्नका लागि समन्वय र सहजीकरण होस् । यसरी जाँदा हरेक व्यवसायी राज्यसँग जोडिने र राजश्व संकलनमा समेत उपलब्धि हुनुका साथै व्यवसायीले पनि अभिभावकत्वको महसुस् गर्ने थिए ।
अन्तमा, यस अनलाइन साझामार्फत् भन्नैपर्ने केही छन् कि ?
घरेलु तथा साना उद्योगी महासंघको विषयमा आफ्ना कुराहरु राख्न दिएकोमा यस अनलाइनप्रति आभारी छु । र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरुलाई आफ्नो हकहितका लागि सबै एकजुट भई लाग्न अनुरोध गर्दछु ।
प्रस्तुतीः नवीन लोचनमगर